The Iche Gold plated, Gold Vermeil, Gold Jupụta, Karat Gold
CZ nkebisi Chart
Cubic zirconia bụ a mmadụ mere nkume eji na ebe nke diamonds. Ọ bụ cubic crystalline ụdị zirconium dioxide. The synthesized ihe onwunwe bụ ike, enweghị ntụpọ na-agba oké yie a zuru okè diamond. Ruru ya ala na-eri na oké anwụ ngwa ngwa, CZs na-na-eji na rhodium plated sterl ...
Ilekọta Your Silver plated Gold ọla
Ilekọta Your Silver plated Gold ọla 1.Keep ọla n'ebe ike na-ebupụta, bumps na scratches ga-eme ka gold oyi akwa na-eyi pụọ ngwa ngwa. 2.Lightly ehichapụkwa gị ọla na a dee mmiri owu ákwà. O nwere ike inyere iji kpochapụ unyi n'elu na yi ewepụ gold oyi akwa. 3.Gently ete nke ...
Ntak emi Họrọ Gemnel ọla
Yiwu Gemnel ọla Factory, specializes na n'ichepụta, na-emepe emepe na-emebe nile di iche iche nke ọla-ọcha necklaces, ọla ntị, ọla aka, mgbaaka na ihe ndị ọzọ ọla tent. Anyị bụ otu nke n'elu ọla-emepụta nke ere ozugbo wholesalers na Jeriko gburugburu ụwa, na-elekwasị anya na-eke ...
address Nke 121, Chunhan Road, Yiwu, China